Hagaha Socdaalka ee Adana Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidada - Hotels Friendly Hotels
Hagaha Socdaalka Adana Xalaal
Covid-19 gudaha Turkiga
Adana waxay ku taal badda Mediterranean.
Ziyapaşa Caddesi ee bartamaha Adana
Jiifinta masaafo aad u fog oo ka durugsan xeebta Mediterranean, oo ku taal Bartamaha Cilician Plains iyo banka Seyxaan Webiga, Adana waa magaalada shanaad ee ugu dadka badan dalka Turkiga waxaana ku nool dad ka badan 1.5 milyan. Inta badan looma yaqaan dalxiis taga, in kastoo, inta badan la barbar dhigo deriskeeda koonfurta iyo galbeedka. Waxaa jira goobo xiiso leh oo ku yaal baadiyaha ku xeeran.
Adana Casriga ah wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo aad u kala duwan: Xarunta hore ee magaalada oo ciriiri ah iyo mid cusub, inta badan xaafadaha dhaadheer ee ka soo horjeeda biyo-xireenka Seyhan ee waqooyiga Xarunta hore, oo badanaa loo yaqaan Kuzey Adana or Yeni Adana (ie "North Adana" ama "New Adana", siday u kala horreeyaan).
In kasta oo ay ku taal Adana waa magaalo casri ah oo casri ah. Tani waxay qayb weyn ka tahay joogitaanka saldhigga NATO ee Incirlik, oo magaalada siiya dad aan caadi ahayn oo reer Galbeed ah, iyo Turki wax ku bartay ajaanibta. Adana sidoo kale waa meel loo dalxiis tago ilkaha, iyada oo ay ugu wacan tahay tiro badan oo raqiis ah, wax ku ool ah, dhakhaatiirta ilkaha ee ku hadla Ingiriiska.
Madaarka Adana Sakirpasa (oo ku yaal bannaanka magaalada). Waa bas gaaban oo aad u gaaban bartamaha magaalada (qiimihiisuna yahay 20 TL) waxaana badanaa u adeegta dolmuş.
Bas u raac Adana
Sida waddanka intiisa kale, qaab kale oo caadi ah oo halkan lagu tago waa in la isticmaalo basaska. Waxay halkan si joogto ah uga yimaadaan Ankara, Istanbul, Izmir, iyo dhowr magaalo oo kale oo ku xeeran Turkiga. Waqtiga safarka ee Istanbul waa qiyaastii laba iyo toban saacadood, qiimayaasha laga bilaabo 50 TL. Shirkadaha basaska ee magaalada dhexmara waxaa ka mid ah Varan, Ulusoy, iyo Metro. Hubi inaad ka degto saldhigga saxda ah maaddaama basaska badankood ay sidoo kale istaagaan saldhig ku yaal agagaarka, qiyaastii 4 km galbeed ka xigta Xarunta Magaalada. Ka degitaanka saldhigga khaldan ayaa laga yaabaa inay niyad jabto, laakiin ma aha musiibo maadaama bas maxalli ahi isku xiro. Saldhigga basaska ee Bartamaha Magaalada wuxuu ku yaal meel u dhow hoteelka Hilton.
Tareen ku raac Adana
Wadada ugu fiican ee ka timaadda Istanbul ama Ankara waa in la raaco tareenka dheereeya ee YHT ee loo maro Konya. Halkaas waxaa ka baxa tareen maalinle ah qiyaastii 14:30, isagoo qaadanaya lix saacadood isagoo sii maraya Karaman ilaa Adana; tareenka laabashadu wuxuu ka baxayaa Adana qiyaastii 07:40. Marka isku-xirnaasho maalin isku mid ah ayaa suurtagal ah. Khadadka udhaxeeya Konya iyo Adana ayaa loo casriyeeyay YHT: waxaa jiray xiritaan dheer oo qayb ahaan ah 2016/17, iyo khalkhalka mustaqbalka ee injineernimada ayaa umuuqda mid suuragal ah.
The Cukurova Express seexdo habeenki u dhaxeysa Ankara iyo Adana ayaa hakad la geliyay dhowr sano shaqooyinka dhismaha awgood, laakiin wuxuu soo laaban doonaa bisha Diseembar 2018. Tareen maalinle ah oo u dhexeeya Adana iyo Kayseri iyo tareenno yar oo goboleed oo ka kala socda Elazig, Mersin iyo Iskenderun ayaa sidoo kale la heli karaa. Khadadka Aleppo iyo Gaziantep oo uga sii gudbaya Syria ilaa Mosul ee Ciraaq, ayaa xirnaanaya waqti aan la cayimin.
Saldhiga tareenka ee Adana waxay ku taalaa Atatürk Cd, dhamaadka waqooyiga magaalada bartamaha.
wadista Adana waa ikhtiyaar; laga bilaabo Ankara, caasimadda qaranka, waxaa jira waddo weyn dhammaanteed (Waddo Yurub ah: E90) laakiin masaafooyinku waa dheer yihiin. Wadada weyn O-21 isku xiri doonta labada magaalo, laakiin kama sii gaarayo waqooyiga dhanka Ni fromde waqtigaan, sikastaba ha noqotee xitaa haddii uusan jirin waddo loo maro qiyaastii kalabar wadada ka timaadda Ankara, wadada weyn ee hadda jirta ayaa kala soocday jihooyinka ku hareeraysan, si kasta. Markaad dhaafto marinka Cilician Gates (Gülek Boğazı) adoo maraya Buuraha Taurus ee Bannaanka Cilician, ka qaad dhanka O-51 dhanka bari.
Ku soo wareegida Adana
Socodka gudaha Adana - waxaad ku sahamin kartaa badhtamaha magaalada Adana adoo lugeynaya. Aad bay u sahlan tahay oo lagu raaxaysan karaa in lagu dhex wareego Xarunta Magaalada.
Basaska magaalada - Shabakad bas oo ballaaran oo ay ku jiraan basaska magaalada iyo buuxsami.
Adana Metro - Waxa kale oo jira qadka tareenka dhulka hoostiisa mara, in kasta oo ay tahay kaliya gaaban gaaban oo ah 13 saldhig.
Dad badan oo taksiyada iyadoo qiimayaashu u dhigmayaan dalka intiisa kale.
Buundada lanatalan. Buundada ugu dheer dalka Turkiga.
Buundada Justinianus Roman.
Biyo-xireenka Seyhan, Jasiiradda Jacaylka, & Jasiiradda Ameerika.
Dhaamka Hore iyo Dilberler Seki.
Old Town iyo Tower-ka saacadda.
Masaajidka Sabancı. Hal meel oo ay tahay inaadan dhaafin intaad joogto Adana. Masjidka waxaa la dhisay 1999 waana masaajidka ugu weyn dalka Turkiga.
Matxafka Qadiimiga ah ee Adana. Dib loo furay booqashooyinka dib u soo celinta ka dib (marka laga reebo qaybta taalladaha dhagaxa, wali dib loo soo celiyo). Free.
Matxafka Dhaqanka ee Adana. Xidhan dayactirka.
Madxafka Misis Mosaic.
Farshaxanka Farshaxanka ee Gobolka.
Maxaa laga qabanayaa Adana
Ku wadista harada agteeda iyo aragtida muuqaalka quruxda badan waa mid ka mid ah waxyaabaha aad sameyn karto inta Adana ku sugan tahay. Inta badan dadka deegaanka waxay fiidkii ku qaataan cabbitaanka biir harada.
Waad booqan kartaa magaalooyinka qadiimiga ah ee ku xeeran Adana, sida Magarsus, Ayas, Commana, Castabala, iyo Misis.
Waxaad aadi kartaa Lagoon Akyatan ama Kapuzbasi Waterfall.
Waad dabaalan kartaa (Karataş oo ku taal xeebta Mediterranean, koonfurta Adana), hase yeeshe dadka degan Turkiga badanaa waxay aadaan Mersin markay rabaan inay dabaasha aadaan.
Waxaad aadi kartaa Aqualand (barkad mowjado ah, webi caajis ah iyo bogag kala duwan).
Waxaa ku yaal bartamaha magaalada 3 saunas (Yeni Sauna, Bizim Sauna iyo Sirin Sauna). Lacagta gelitaanka waa 10 euro, duugista waxay ku kacaysaa a 10. Sidoo kale waxaad aadi kartaa musqulaha dhaqameed ee Turkiga.
Adana waxay leedahay afar xarumood (Optimum, Galleria, M1 iyo Carrefour). Meesha ugu wanaagsan ee laga baxo iyo M1 Shopping Center ayaa ugu weyn. Ugu fiicnaa waxaa la furay badhtamihii 2011 waana tan ugu cusub. M1 iyo Optimum waxay wadaagaan qaar badan oo ka mid ah dukaamada isla meesha aad ka heli karto ku dhowaad dhammaan noocyada adduunka. (Real Hypermarket, Praktiker, Media Markt, Zara, Mudo City, Cinebonus, Tepe Home, Toys R'Us, Gap, US Polo)
Adana Kebab. Dhadhan iyo caan Adana kebap iyo qiiqa, badanaa la socda salgam (dabocase) casiir iyo / ama raki (cabitaan khamri dhaqameed Turki ah).
Cafe Ora (Wadada Baraj, waxay udhowdahay boosteejada basaska). Waxay leedahay bar dabaqa labaad. Waxaad yeelan kartaa a bici bici (dhaqameed Adana macaan) oo loogu talagalay TRY3 halkaas.
Mado's (On Cemal Paşa, Kurttepe, Toros St, Carrefour Mall, iyo M1 Mall). Dukaan macaan. Fasal ka sareeya kan wadadaada wax ku iibiya iyo qiimo yar, laakiin cunto macaan. Waa inaad cuntaa jalaatada Turkiga ee gaarka ah.
Beerta Zirve (Lake).
Starbucks (Ziyapaşa Ave, Xarunta Dukaameysiga M1, Xarunta Jaamacadda Cukurova, New Adana). Adana waxaa ku yaal 4 dukaanno oo loo yaqaan 'Starbucks Coffee' oo ku yaal Adana, marka lagu daro mid ku yaal Incirlik. Kan Ziyapaşa waa mid caan ku ah qurbajoogta iyo dadka ku hadla Afka Ingiriiska ee Turkiga.
Hotel Garajlar (Masaajidka weyn agtiisa). Waa inaad lacag dheeraad ah ka bixisaa qubayska (5 TL). TIX15.
Hilton Adana, Sinanpaşa Mh., Hacı Sabancı Blv. Maya: 1 (U dhow Wabiga Seyhan iyo bartamaha magaalada). Dhismaha ugu dheer magaalada. Waxay u muuqataa wax la yaab leh magaalo aan sidaas u weyneyn oo leh Hotel weyn oo Hilton ah. Laga soo bilaabo € 100. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Konya (Masaajidka weyn agtiisa). Haddii aad ku adkeysato, waxay ku siin karaan qol jaban oo yar. Qolalka waa nadiif laakiin kuleyli ma jiro. 20 TL-aan-hawo-lahayn, 30 TL qolalka leh hawo-mareenka.
Lambarka taleefanka Adana waa (+90) 322.
Xagee loo socdaa Adana
Qaar ka mid ah magaalooyinka iyo indhaha ku hareeraysan Adana waxaa ka mid ah:
Tarsus - St Paul's Well wuxuu ku yaal barxad dheer oo la rumaysan yahay inay tahay goobta uu ku yaal guriga St. Paul. Waxa kale oo aad booqan kartaa The Cleopatra Gate, wadada Roman iyo Matxafka Tarsus ee ku yaal Tarsus
Mersin - waxay 65 km dhanka galbeed ka xigtaa magaalada Adana, waa magaalo kale oo weyn oo aagga ku taal, in kasta oo kani ku yaal xeebta.
Incirlik - waxay ku taal meel 10 km bari ka xigta magaalada Adana, waa goob saldhig NATO ah oo ay ku badan yihiin joogitaanka Mareykanka.
Antakya - dhowr saacadood koonfurta, oo leh taariikh badan.
Kizkalesi - qiyaastii 100 km dhanka galbeed, waa qalcad taariikhi ah oo ku taal meel ka baxsan xeebta.
Karatepe - burburkii magaalo reer Hiti oo ku yaal geedaha geedaha ku dhow harada biyo xireenka ee waqooyi-bari magaalada.
Anavarza - Burburka magaalo yar oo Roomaan ah oo leh qubays burbursan ayaa loo beddelay matxaf ilaa 30min waqooyi ka xigta Daarta Yilan. Waxaad sidoo kale fuuli kartaa jaranjarada dheer si aad u gaarto qalcad weyn oo Crusader dusheeda ah oo ku taal meel dhagax weyn oo ka koreysa oo eegaysa magaalada burbursan.
Qasriga Yılan - Qalcaddii taariikhda-Saliibiyiinta ee dusha sare ee buur dhagax leh oo ay ku hareeraysan yihiin bannaano siman oo aan dhammaad lahayn bariga magaalada, waddada / tareenka ilaa Osmaniye. Soo qaado bas yar oo kusii jeeda Ceyhan si aad halkaas u tagto, una sheeg darawalka inaad ka degi doonto Yılan Kale. Markaad ku noqonayso, sug mid ku soo noqonaya Adana.
Madxafka Misis Mosaic - Jidka taariikhiga ah ee Xariirta, masaafo dhan 26 kiiloomitir Adana. Gelitaanku caadi ahaan waa 5 TL, laakiin mararka qaarkood waa bilaash, sidii dhacday Sept Sept 2012.
Kahramanmaras - waa magaalo yar oo ku taal buuraha leh matxaf qadiim ah oo caan ah, oo caan ku ah jalaatada (qiyaastii 2½ saac bas ah).
Gaziantep - Magaalada lixaad ee ugu weyn dalka Turkiga, waxay u booqatay inta badan matxafkeeda muusikada iyo naxaas-ka shaqeeya agagaarka qalcadda (qiyaastii 2½ saacadood oo bas ah)
Baadhitaano Goobo Badan oo Xalaal Turki ah
Tilmaamaha Safarka Riyaad Xalaal
Tilmaamaha Safarka Muslimiinta Jeddah
Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Madiina
Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Magaalada NEOM
Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Ta'if
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Turkiga > Hagaha Socdaalka Adana Xalaal